7 Off Wadada Wadada Beaten ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Off Wadada Wadada Beaten ee Yurub
Safarka iyo ogaashada meelaha cusub waxay ina siisaa baalasho aan ku riyoonno, ku dhiirran, oo wax bartaan. Adduunyada sidan u balaadhan, inta badan macquul ma ahan in wax walba la arko, sidoo kale suurtagal maaha in la arko oo lagu raaxeysto meel kasta oo Yurub ka mid ah. Iyada oo meelo aad u xiiso badan, kaliya waxaad ku riyoon kartaa inaad ogaato dhamaantood. Haddii aad runtii raadineyso inaad ku raaxeysato sida maxalliga ah oo aad u furan tahay raadad cusub, markaa waan haysannaa 7 aan caadi ahayn oo ka baxsan wadooyinka garaacista ee aad ku ogaan karto.
Laga soo bilaabo Faransiiska ilaa Switzerland, 7 dhibco duurjoogta ah, harooyinka xasilloonida, iyo qalcadaha sixirka ayaa sugaya inay ka mid noqdaan albumkaaga sawirka ah ee fasaxyada ugu xusuusta badan Yurub. Sidaas, xirxiran nalka oo diyaar u noqo inaad sidato kaliya xusuusta iyo sheekooyinka, sidaad u bilaawday nolol cusub, isla markaana ku soco waddooyinka aan safrin.
1. Dhig Goobaha Beaten Waddooyinka: Occitanie, France
Waxay xuduud la leeyihiin Badda Mediterranean-ka iyo meelaha sare ee Pyrenees-ka, gobolka Koonfurta Occitanie ee Faransiiska ayaa ah mid cajiib ah. Hoyga magaalo-madaxda dhexe, Toulouse cajiib ah, xeebaha, iyo khamri, Gobolkan Faransiiska ah waa mid soo jiidasho leh oo yaab leh oo ka socda wadada la garaacay ee Yurub si kor loogu qaado liiska baararkaaga.
Occitanie aad ayey uga duwan tahay kuwa Faransiiska Riviera iyo Paris, Thanks to xawaare gaabis ah iyo riyo leh. Sayidka, Waqtigaaga waad qaadan kartaa sahaminta Magaalada Cathar iyo qalcadeeda, marka lagu daro Carcassonne cajiibka ah. Hadaad jeceshahay nashaadaadyada banaanka sida socodka ama orodka, ka dib Gorges du Tarn canyon iyo Cevennes National Park ayaa fiican. The park qaranka waa keyd biosphere noolaha UNESCO, iyo mid ka mid ah tobanka jardiinooyinka qaran ee Faransiiska.
Waxaad saldhig ka dhigi kartaa caasimadda casaanka iyo quruxda badan, Toulouse, ama magaalada quruxda badan ee Albi. Labaduba waxay cajiib ku yihiin waddada la garaacay magaalada burburay gudaha faransiiska iyo tacliinta dheer iyo Fasax Faransiiska. Waxaad si fudud oo raaxo leh u gaari kartaa Toulouse safarka tareenka ka Paris iyo Barcelona ee ku saabsan 5 saacadood.
Lyon ilaa Toulouse oo Tareen ah
Paris ilaa Toulouse by Tareenka
Waa hagaag Toulouse ee Tareenka
Bordeaux ilaa Toulouse by Tareenka
Tuulada Hallstatt waa tuulo sawir kaamil ah oo ku taal Harada Hallstatt. Guga, dhici, ama jiilaalka, waa janno buuxda in xilli kasta oo sanadka ah, Bixiya waxqabadyo badan oo bannaanka ah oo loogu talagalay safrayaasha xiisaha leh ee adrenaline. Ama taa lidkeeda, hadaad ku riyooneyso inaad ku qarxiso harada adigoo ku dhex jira galaas khamri ah ama fuulitaan doon hareeraha harada, Hallstatt waa meesha ugu wanaagsan ee loo hiigsan karo.
Tani meel qurux badan waxaa ka dhigay noo 7 ka baxsan wadooyinka la garaacay ee Yurub ee liiska mahadnaqayaasha godadka waaweyn, haro buluug buluug ah, iyo Dooxada Caanood leh views qeybalay iyo dariiqyada. In aan ku xuso, in wali dunida inteeda kale laga helay.
Hallstatt waa 3 saacado ka fog Vienna safarka tareenka. Sidaa darteed, haddii aad rabto fasax aan la ilaawi karin ee muuqaalka muuqaalka leh ee Austria, iyo ugu muhiimsan ka fog dadka badan, ka dibna Hallstatt waa meesha ugu fiican ee laga garaaco wadada la garaaco.
Munich ilaa Hallstatt waxaa qoray Train
Innsbruck ilaa Hallstatt by Train
Passau ilaa Hallstatt oo Tareen ah
Rosenheim ilaa Hallstatt waxaa qoray Train
3. Dhig Goobaha Beaten Waddooyinka: Haarlem, Netherlands ayaa
Ka yar oo loo yaqaan deriskeeda Amsterdam iyo Rotterdam, Haarlem ayaa ah tan ugu fiican ee laga garaaco wadada magaalada Netherlands. Kaliya 18 daqiiqado ka fog Amsterdam tareenka, Soo jiidashada Haarlem ayaa kaa kaaxeyn doonta ugu yaraan usbuuc dhammaad ah.
Dhaxalka dhaxalka magaalada, naf nool oo dabeysha wata, abuuro jawi la yaab leh. Hadaad rabto inaad Holland khibrad u hesho Holland ahaan, ka dibna soco jidadkeeda ciriiriga ah, ilaa Grote Markt. Markaasuu, fuuli karamarka dabaysha, Milkiilaha Adriaan, aragtida xiisaha leh ee magaalada iyo webiga.
Hab kale oo weyn oo aad fasaxaaga ugu qaadan karto Haarlem waa inaad booqato breweries-ka ugu da'da weyn. Dib ugu soo noqo 1620, waxaa 100 meelaha lagu kala baxo, maantana waad dhadhamin kartaa qaar ka mid ah cuntooyinka jir ah. Kafiican, booqasho kadib booqasho mid ka mid ah matxafyada badan ee magaalada, waana jiraan matxafyo badan gudaha Haarlem marka loo eego magaalooyinka kale ee Nederland.
Si aad u soo gabagabeyn, tani waxay ka baxsan tahay magaalada raadkeeda la garaacay waa miro qarsoon Yurub gudaheeda wadamada ugu jecel oo gebi ahaanba mudan booqasho!
4. Harada Orta, Italy
Dalxiisayaasha badankood waxay u safraan Talyaaniga si ay u dhadhamiyaan cunnada ay Talyaani oo aad ku raaxaysato nolosha yar yar ee nolosha, sida ay dadka deegaanku qabaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo badan oo Talyaani ka badan oo sipiyan a galaas oo khamri ah oo ay ku jiraan baastada cusub. Lake Orta ee harooyinka 'harooyinka waa meel layaableh oo jacayl ah. Meel qarsoon buuraha dhexdooda, oo laga soocay harada caanka ah ee Lake Maggiore oo uu qoray Monte Mottarone, Lake Orta waa u qalan tahay korsigaaga oo dhammaystiran, iyo waqti ay ku soo marto dalka Taliyaaniga oo ka baxsan dariiqa laga garaacay iyo orodka deggan ee nolosha.
From wadooyinka hortayada, raacid doon, khamriga agtiisa, iyo dabaasha, Lake Orta waa qurux qurux badan oo Talyaani ah, taas oo ay wali soo ogaadeen dalxiisayaasha.
Lake Orta waa laba saacadood oo tareen ah oo laga raaco Milan, iyo 5 saacadaha laga bilaabo Zurich ilaa muuqaalka muuqaalka kore ee Alps.
5. Dhig Goobaha Beaten Waddooyinka: Bohemia, Czech Republic
Kaliya dhawr saacadood ka fog fowdada iyo jahwareerka Prague, dhul halyeey iyo muuqaal muuqaal leh ayaa sugaya. Beerta qaran ee Bohemian Switzerland, Beerta Qaranka Czech Svycarsko, waxay ku taal xadka Jarmalka. Pravcicka Brana, dhisme dhagax weyn leh, biyo mareennada, iyo jidad badan oo lugeynaya, waa safar tareen gaagaaban oo ka fog Decin, magaalada ugu dhow.
Keyd kale oo weyn oo dibedda ku yaal ayaa ah Kladska Dabiiciga keydka. Waxaa jira raad qurux badan oo harada ah, waana mid si gaar ah u yaab badan deyrta. laakiin, hadaad doorbideyso magaalooyinka yar yar iyo wada sheekaysiga, ka dibna waad jeclaan doontaa neo-Gotiic Hluboka Chateau.
Baaskiil ama lug, Antwerp waa mid xiiso iyo xamaasad leh. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Beljamka, Antwerp aad bay u iloobaan dalxiisayaasha. Si kastaba ha ahaatee, waa wax la yaab leh oo ka baxsan waddada loo garaacay ee Yurub loogu talagalay madadaalo sabtida iyo axada.
Magaalada ayaa loo qaybiyay 3 aagagga: magaalada jir, Koonfurta, iyo dekada, kuwaas oo guryo u ah dhaqamo kaladuwan iyo dadka ka kala yimid daafaha dunida. Sidaa darteed, waa jannada diineed, u adeego wax kasta oo qalbigaagu doonayo. Madxafyada, Suuqa Weyn, cathedrals, naqshadeeyayaasha hal-abuurka moodada sare leh, waa saacad ka fog caasimada, tareen.
Sidaas, haddii aad ka heshid dheeman aad iska leedahay xarunta ganacsiga dheeman ee ugu mashquulka badan, jacaylka shukulaatada, iyo dukaamaysiga, Tani waa meesha looga baxo garaacista socdaalka waa waajib.
7. Dhig Goobaha Beaten Waddooyinka: Luzern, Switzerland
Goobta ugufiican isweydaarsiga jacaylka ee Switzerland, Lucerne waa mid weyn. Socodka wabiga, Daawashada Mount Pilatus iyo buuraha buuraha leh ee Mount Titlis waxay ka tarjumayaan biyaha, iyadoo aysan jirin dalxiisayaal ku xeeran, riyo Swiss ah.
Lucerne aad u qurux badan ayaa saldhig u ah safarada maalin ilaa Alps, oo ay wali soo ogaadeen socotada. Marka waxaad heli doontaa fursad qaali ah oo aad ku raaxaysato oo aad Switzerland uga baarto jidka la garaacay. Ku soco waddada masduulaaga oo tijaabi xooggaaga beerta xarigga, kaas oo labaduba ah hawlo bannaanka ka socda oo fiican oo ku xeeran Lucerne.
Waxay ku taalaa cagta cagta Alps ee xadka Switzerland iyo Jarmalka, Lucerne waa mid aan la ilaawi karin oo laga soo qaaday wadada la garaacay ee Yurub. Lucerne waa qurux qurxoon oo ku taal bartamaha Switzerland waana just saacad tareen laga raaco garoonka diyaaradaha Switzerland.
Zurich to Lucerne by Tareenka
Bern ilaa Lucerne by Train
Geneva ilaa Lucerne by Train
Konstanz ilaa Lucerne by Train
Si aad u soo gabagabeyn, Yurub waxaa ka buuxa yaabab, halyeeyada, sirta, iyo dabeecadda aysan dalxiisyaashu u dhaqmin. Haddii aad rabto khibrad aan caadi ahayn oo aad dareemeyso wadamada ugu waa weyn Yurub. Si kastaba ha ahaatee, hadaad jeceshahay inaad socodsiiso, sida dadka deegaanku ay sameeyaan, markaa waxaad ku jirtaa wakhti cajiib ah meela kasta oo safar ah oo aan kor ku soo sheegnay.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tigidhada tareenka ugu raqiisan meel kasta oo meelaha gaarka ah taga ee liistadayada ah.
Ma waxaad dooneysaa inaad ku dhejiso bartayada internetka “7 Off the Beaten Path Destinations in Europe” boggagaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/off-beaten-path-destinations-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Antwerp magaalabreakeurope waddo jabin waddada dhinaceeda tareen safarka traintravelaustria traintravelfrance travelitaly travelswitzerland